Fametahana bilaogy: Fotoana famerenan'ny mpamaky! | Martech Zone
Fametahana bilaogy: Fotoana famerenan'ny mpamaky!
Alakamisy, Jolay 5, 2007 Alakamisy Oktobra Oktobra 23, 2014 Douglas Karr
Aleo tsy handany ny fotoan'ny hafa! Te hanampy haingana ny bilaoginao na ny tranokalanao aho ARY hahazo fitiavana rohy vitsivitsy amin'ny bilaogiko ianao.
Io voalaza io dia handroaka ny fifamoivoizana ary hanampy amin'ny laharam-pahamehanao ao Technorati sy ny Search Engine. Raha te-hanao an'izany dia mila mivoaka an-tsokosoko ao amin'ny bilaoginao aho, ary tendron'ny izany!
Ahoana ny fomba hahazoana ny bilaoginao:
1. Lazao amin'ny tranokalanao ny bilaogiko.
2. Arotsaho aho tsipika iray amin'ireo fanehoan-kevitra amin'ity lahatsoratra ity miaraka amin'ny rohy mankany amin'ny hafatrao.
Ny fampanantenako: Handany minitra roa hamerenako ny laminao, ny fampiasa ianao, SEO, ary ireo hafatrao farany mba hahitana zavatra izay hanampy amin'ny fanovana ny tranokalanao na ny bilaoginao. Hiezaka aho hanao ny tendrony tsy manam-paharoa amin'ny bilaogy na tranokala rehetra fa tsy hiezaka hivoaka sy hiaraka 'hanipy' bilaogy marobe.
Dia izay! Andao ary bolongana-tipping!
Aza misalasala mandefa an'ity rohy ity amin'ny olona tianao.
Tags: fametahana bilaogympamaky payback
Google Adwords: mitahiry vola roa…
Fametahana bilaogy: sary an-tsaina + fanavaozana
Jolay 5, 2007 amin'ny 10:56 PM
Tsy mandà an'io tolotra mahafinaritra io aho.
Jul 6, 2007 amin'ny 6: 12 AM
Nahazo toro-hevitra ianao! 🙂
Jul 6, 2007 amin'ny 1: 52 AM
Ry Doug, nandefa rohy mankany amin'ny blôginao aho tao amin'ny:
Manana bilaogy tena tsara ianao ary tena mianatra betsaka amin'izany aho.
Jul 6, 2007 amin'ny 9: 47 AM
Hafiriana no manankery ity tolotra ity? Manana raharaha ao an-trano aho (tsia, tsy hanandrana hanamboatra asa vaovao miaraka amin'ny 'bilaogy' aho mba hamaritana ny fanadiovana tsy maintsy ataoko amin'ny atiko :).
Jul 6, 2007 amin'ny 11: 24 AM
Amin'ny fotoana rehetra, Pat!
Jul 6, 2007 amin'ny 11: 52 AM
Vonona hatolotra 🙂
Jolay 6, 2007 amin'ny 2:43 PM
Efa ela aho no te hangataka anao hamerina hijery ny bilaogiko, ary tsy azoko ovaina izany! http://www.srcoley.com/2007/07/06/going-hoofs-up/
Jolay 6, 2007 amin'ny 4:04 PM
Mila amin'ny teny anglisy ve ny Blog? MISAOTRA
Jolay 6, 2007 amin'ny 6:20 PM
Tiako ny hanome toro-hevitra vitsivitsy ho an'ny bilaogy tsy anglisy. Toa fanamby lehibe. Tsy hitsara ny votoaty aho mazava ho azy fa tiako ny mijery ny layout, structure, SEO, sns!
Jul 7, 2007 amin'ny 6: 26 AM
Jul 7, 2007 amin'ny 7: 11 AM
Salama indray! Misaotra namaly!
Jolay 7, 2007 amin'ny 3:26 PM
Doug - na mandeha mijery ny Hamelife ianao na tsia - misaotra amin'ity tolotra lehibe ity.
Nampifandray anao tamin'ny lahatsoratro farany aho: Oh, My! Ny Bennet Girls dia ao amin'ny rohy isan-kerinandro.
Horaisina am-pankasitrahana izay torohevitra rehetra.
Jolay 7, 2007 amin'ny 5:22 PM
Nanampy rohy mankany amin'ny tranokalanao aho ao amin'ny bilaogiko, hita eo amin'ny ilany havanana amin'ny tranokalako.
Jul 8, 2007 amin'ny 4: 25 AM
Hmm, mifototra amin'ny fandraisana anjara, manantena aho fa manana clones Doug roa mipetraka manodidina 🙂
Jul 8, 2007 amin'ny 11: 09 AM
Mendrika ny asa izany! Ny tena mahatsikaiky dia rehefa nanomboka aho dia te-hanao soso-kevitra tokana isaky ny bilaogy fotsiny aho – saingy tsy afa-manoatra aho rehefa manomboka!
Jolay 8, 2007 amin'ny 9:53 PM
Hivoaka amin'ny zoma ny lahatsoratra…Misaotra!
Jul 9, 2007 amin'ny 8: 39 AM
Te-hitondra anao amin'ny tolotrao aho. Ny lahatsoratra nanondro ny blôginao dia ao amin'ny:
Ary ny bilaogy tiako homenao hevitra dia ao amin'ny URL. Raha manana fanontaniana ianao dia alefaso mailaka fotsiny aho, dia misaotra.
Jul 9, 2007 amin'ny 9: 51 AM
Tena tolotra tsara i Douglas. Misaotra nizara ny fahendrenao. Ity ny lahatsoratro momba ny bilaogiko. Nahita anao aho tamin'ny famandrihana ny bilaogin'i Dawud Miracle. Fiadanana.
Jul 9, 2007 amin'ny 10: 33 AM
Tiako ity ry Doug! Mandresy-mandresy - mifanaraka tsara amin'ny toe-tsain'ny bilaogy. 🙂
Jolay 9, 2007 amin'ny 9:26 PM
Jul 11, 2007 amin'ny 8: 31 AM
Fisondrotana mahagaga ity. Miezaka mamantatra ny fomba ahafahako manao zavatra mitovy amin'ny mpamaky ahy aho!
Ity ny lahatsiko.
Bilaogin'ny Egg Marketing momba ny varotra madinika
Jolay 12, 2007 amin'ny 12:02 PM
Hevitra ara-barotra lehibe Doug. Raha manana minitra vitsivitsy ianao handinihana ny tranokalako dia ho ankasitrahana tokoa ny fahendrenao.
Jul 13, 2007 amin'ny 2: 07 AM
Doug dia natolotra anao http://netglobalbooks.com/blog/
Ankasitrahana tokoa izay torohevitra na soso-kevitra.
Hiverina aho hahazo torohevitra sy fanabeazana tsara kokoa avy amin'ny blôginao.
Jul 13, 2007 amin'ny 7: 32 AM
Mahafinaritra ry akama a!
Jul 13, 2007 amin'ny 8: 06 AM
Doug - Tsy nahatohitra ny tenako tamin'ny fianarana avy amin'ny tompony mihitsy aho
Ity ny lahatsoratro
Tiako ny hevitrao momba ny fomba famenoana ny bilaogiko
Jolay 13, 2007 amin'ny 2:50 PM
Nahazo hevitra ny hijery anao ary hahazo "BLOG Tipped" avy amin'ny iray amin'ireo bilaogy tiako indrindra, "Web Strategies by Jeremiah.".
Koa azafady, azafady omeo hevitra ny bilaogiko! Fandrosoana maro Misaotra Anao!
Jolay 15, 2007 amin'ny 5:15 PM
OK, ity misy fangatahana hafa.
Jolay 16, 2007 amin'ny 8:47 PM
Ity no tranokalan'ny bilaogiko, azafady azafady.
Jul 17, 2007 amin'ny 2: 47 AM
Tolotra tsara. Tena afaka nampiasa fanampiana aho!
Jolay 18, 2007 amin'ny 10:07 PM
Salama Doug, efa nanao lahatsoratra milaza ny sitrakao aho hanampy anay
Ity ny rohy, thanx 🙂
Jolay 19, 2007 amin'ny 4:36 PM
Te hampiasa ny fahendrenao koa aho…
Jul 20, 2007 amin'ny 7: 50 AM
Raha mbola manana angovo “tipping” sisa ianao dia tiako raha afaka mijery ny PPC Hero ianao.
Torohevitra momba ny bilaogy: Ny zava-dehibe manaraka
Jolay 21, 2007 amin'ny 9:43 PM
Lahatsoratra voalahatra ny alatsinainy maraina:
Mitady izay azonao atsipy amiko aho – môdely, layout, SEO – na inona na inona sy ny zavatra rehetra. Te-hanao fanavaozana aho ary mila mahafantatra izay mety sy tsy mety.
Mirary ny soa indrindra!
Jul 23, 2007 amin'ny 7: 59 AM
Toa hampanaovina anao be ity zavatra tipping ity. Ity ny lahatsoratro miaraka amin'ny rohynao:
B2B IT sy Media Sosialy 2: Ny fomba fijerin'ny mpivarotra
Misaotra, ary mirary soa!
Jolay 31, 2007 amin'ny 1:16 PM
Tsy azoko tsinontsinoavina izany tolotra tsara izany.
1 Aogositra 2007 à 3:02
Doug – ity ny rohy mankany amin'ny bilaogiko ao amin'ny vondrom-piarahamonina entin'ny mpikambana ho an'ny mpandinika orinasa sy matihanina amin'ny fampiasana. BTW, "nandoa vola mialoha" aho amin'ny fitsidihanao manaraka hamahana ny fiankinan-doha amin'ny kafeinina ao amin'ny Starbucks!
Manampy ny blôginao ihany koa aho ao amin'ny Efitrano Famahananay hita ao http://www.mycatalyze.org/Blogs/CatalyzeBlogsFeedRoom/tabid/1301/Default.aspx.
Misaotra tamin'ireo torohevitra efa noraisiko tamin'ny tafatafa nataonao tamin'i Paul Dunay.
1 Okt 2007 amin'ny 4:40 PM
Doug – manontany tena fotsiny hoe rahoviana ianao no ho tonga amin'ny blôgy? Nampiako ny blôginao tamin'ny 8/1 ny blôginao ary izao dia 10/1 — miampy efa nividy Starbucks anao aho.
Blog - title=”Fahendrena ankehitriny”
Aug 2, 2007 amin'ny 8: 11 AM
Salama Doug; tsy azoko antoka fa nanao izany aho. Ity ny blaogiko amin'ity volana ity. Nohafoheziko ny toro-hevitra bilaogy hatramin'ny nanombohako azy ireo; ary lasa miresaka bilaogy hafa izy ireo avy eo manome toro-hevitra ho azy ireo. Ho liana amin'izay torohevitra azonao omena ahy aho.
Aug 10, 2007 amin'ny 5: 50 AM
Misaotra amin'ny fanazavana!
5 Feb 2008 tamin'ny 5:32 maraina
Misy andian-dahatsoratra momba ny metrika ara-barotra sosialy. Nampiasa ny lahatsoratrao aho ho ohatra tsara amin'ny fampisondrotana ny laharan'ny Technorati Authority. Azoko antoka fa mahazo tsiky avy amin'izany ianao, jereo eto:
Viral angamba izy io indraindray fa mety tsy collage - raharaham-barotra fotsiny 😉